Meydka gabar seddax sano jir ah oo laga helay magaalada Laascaanood (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Meydka gabar seddax sano jir ah oo laga helay magaalada Laascaanood (SAWIRO)
Meydka gabar yar oo seddax sano jir ah ayaa la sheegayaa in saakay laga helay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kadib markii waalidkii gabadhaasi dhalay ay tan iyo xalay weysanaayeen.
Aabaha dhalay gabadhaasi yar oo lagu magacaabo Yaxye Muudey ayaa warbaahinta u sheegay in meydka gabadhiisa laga soo qaaday meel aan ka fogeyn guriga ay deganaayeen.
Yaxye Muudey ayaa sheegay in fiidkii xalay uu DAAWO u doonay gabadha hooyadeed oo umul aheyd, balse markii uu guriga kusoo laabtay lagu wargeliyay in gabadhiisa ay maqan tahay.
“Gabadheyda yar waxaan baafinaayay tan iyo xalay, kadib markii guriga laga waayay, waxaa la ila soo hadlay saakay markii ay ahayd 9.30 subaxnimo, waxaana la ii sheegay in gabadhii oo meyd ah la helay, markii aan tagay goobta waxaan arkay gabadhii oo jirkeeda ka muuqdo dhaawacyo aad u badan” Sidaasi waxaa yiri Yaxye Muudey.
Sidoo kale, Yaxye Muudey ayaa sheegay inaysan illaa iyo haatan garaneeynin cidda rasmiga ah ee ka dambeysay dilka gabadhiisa yar, iyadoona ciidanka booliska ee magaalada Laascaanood ay haatan bilaabeen baaritaano ku aadan dilkaas.
Dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Maxamuud Axmed Maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa beeniyay wararka sheegaya in gabadhaasi yar la qashay, balse tilmaamay in la dilay.
Wuxuu guddoomiye ku-xigeenka sheegay in ciidamada booliska ay haatan baaritaano ku haayaan sababta ka dambeysay dilka gabadhaasi yar iyo cidda ka dambeysay.
“Gabadha yar lama qalan ee waa la dilay, ciidamada booliiska iyo dhaqaatiirta ayaa haatan looga fadhiyaa inay soo caddeeyaan sababta keentay dilka gabadhaasi yar, hadda waxaa sugeynaa inta baaritaanka laga soo gaba-gabeeynayo” Ayuu yiri guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Maxamuud Axmed Maxamed.